र तपाईं जो Yegor Bortnik थाहा? भन्दा उहाँले देश भर प्रसिद्ध भए? भने, लेखको सामग्री जाँच गर्न निश्चित हुन। हामी प्रतिज्ञा - यो रोचक हुनेछ।
Yegor Bortnik: जीवनी, बाल्यकाल र किशोरावस्था
उहाँले बेलारुस2सेप्टेम्बर, 1972 को गणतन्त्र को राजधानी मा जन्म भएको थियो - मिन्स्क। उहाँले यहूदी र रूसी जरा हो। Yegor पिता को विशेषता आफ्नो उच्च शिक्षा प्राप्त "रेडियो भौतिक।" र आफ्नो आमा एक गृहिणी थियो।
हामीलाई अगाडि छ जो बुझ्न, बस फोटो हेर्न। यो Leva ( "बी-2") छ। र साथीहरू, नातेदार र स्कूलका साथीहरू Yegor Bortnik तिनलाई थाहा छ।
उहाँले अफ्रीका मा बाँकी थियो। आफ्ना पिता Yegor (पेशा द्वारा रेडियो भौतिक) विश्वविद्यालय कंगो मा एक शिक्षकको रूपमा काम चढाइने भन्ने तथ्यलाई। मानिस सहमत भए। यो अफ्रिकी देश मा, त्यो आफ्नो पत्नी र छोरा संग भयो। म Egoru Klyk सिंह दिनुभयो एकपटक। हाम्रो नायक सधैं उहाँलाई यसलाई लगे। यो स्थानीय केटाहरु Bortnikov जूनियर उपनाम दिनुभयो लागि "लेवी"। र त्यो धेरै मन पर्यो।
चाँडै परिवार मिन्स्क फर्के। Egor विभिन्न क्लब भ्रमण, संगीत अध्ययन। को7ग्रेड सम्म उहाँले "चार" र "पाँच" मा अध्ययन। त्यसपछि मान्छे नाटक स्कूल लागि साइन अप। तब देखि, उहाँले मात्र रोचक दृश्य थियो। यो स्टुडियो Bortnik भेट अलेक्जेन्डर Uman छ ( "बी-2" को Shura)। केटाहरु साथीहरू, रचनात्मकता लागि संयुक्त योजना बनाउन सुरु भयो।
1988 मा, Yegor Bortnik अलेक्जेन्डर Uman आफ्नै समूह सिर्जना गरियो। यो "भाइ ब्यान्ड।" भनिन्थ्यो को मान्छे गीतहरू लेखेर र rehearsing लागि धेरै समय बिताए। र आफ्नो प्रयासमा व्यर्थमा थिए। मिन्स्क मा तिहार मा, मान्छे पहिलो स्थान जित्यो। टोलीमा को सफल प्रदर्शन पछि मा shortstop पुन: नामाकरण भयो "सत्यको कोस्ट।" र 1989 मा, Egor र साशा "बी-2" गर्न नाम छोटो।
सुरुमा, समूह बेलारुस को शहर toured। त्यसपछि त्यहाँ काम मा एक ब्रेक भएको छ। 1993 मा Shura अष्ट्रेलिया सारियो। र वर्ष मात्र5पछि लेव पछि लागे।
1999 को गिरावट मा, समूह "बी-2" रूस गए। र आज, यो रक ब्यान्ड थाह छ र हाम्रो देश को प्रत्येक दोस्रो नागरिक प्रेम गर्नुहुन्छ। रचनात्मक piggy Leva र Shura9स्टूडियो एल्बम, धेरै क्लिप र संगीत सयौं। आफ्नो गीतहरू विभिन्न फिलिमहरु लागि साउन्ड ट्रयाक भयो। उदाहरणका लागि, चलचित्र "भाइ 2" मा, "बहिनी" र "अवतरण को ब्रदरहुड" ध्वनि ट्र्याक "कसैले पनि कर्नल गर्न लेख्छन्।"
Yegor Bortnik (बायाँ) दुई पटक रजिस्ट्रीमा कार्यालयमा सम्बन्ध formalize गर्न। आफ्नो पहिलो पत्नी - Irina Makeeva। तिनीहरूले प्रारम्भिक 2000s मा भेटे। यो पहिलो नजर मा प्रेम थियो। एक मान्छे र केटी डेटिङ महिना पछि एक जोडी पछि नै छत बाँच्न थाले। 2002 मा, आफ्नो पहिलो बच्चा जन्मेको - छोरा THEODORE। केटा एक वर्ष पुरानो गरिएका मात्र गर्दा Egor र Irina रजस्ट्रार गए। दुर्भाग्यवश, परिवारको आनन्द लामो लामो थियो। जोडी चुपचाप र शान्तिमा dispersed।
Yegor वर्तमान पत्नी एशिया Shtrayher छ। त्यो आफ्नो पहिलो प्रेम थियो एक पटक। र अब भावना नयाँ जोस erupted। जनवरी 2008 मा, त्यो एक साधारण तेल अबिब छोरा जन्मिएको थियो। त्यतिबेला मान्नेहरूले एक नागरिक विवाहमा थिए। आधिकारिक पति र पत्नी, तिनीहरूले मात्र अक्टोबर 2009 मा थिए। चाँडै तिनीहरूले नाम थियो दाऊदले अर्को छोरा थिए।
यो एक र एउटै व्यक्ति छ - अब तपाईं Yegor Bortnik र Leva समूहको "बी-2" भनेर थाह छ। हामी उहाँलाई आनन्द र रचनात्मक समृद्धि चाहनुहुन्छ!
पिकनिक टोकरी - एक सफल छुट्टी को एक महत्वपूर्ण तत्व
हिर्गीकृत स्पिनको उपचार: रूढ़िवादी र सर्जिकल विधिहरू
राजा योग योगा विद्यालय। बच्चाहरूको लागि योग योगा - सास फेर्न
सर्वश्रेष्ठ शाकाहारी रेस्टुरेन्ट (मास्को): फोटो र समीक्षा
जग, व्यवस्थापन एकेडेमी VEGU इतिहास
युवा उत्सव आयोजकका लागि सुझावहरू - बुझ्न, संगीत, रङ्ग सङ्गीत
लोकप्रिय होटल Severodonetsk